Search Engine Optimization တွင် # 1 အကြောင်းပြချက်ကုမ္ပဏီများပျက်ကွက် | Martech Zone
အဲဒါကိုမှငါ့ကိုနှောင့်အယှက်တ ဦး တည်းအရာရှိလျှင် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization, တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်စုံတစ် ဦး ကဖွံ့ဖြိုးရေးသို့မဟုတ် site ကိုပြောင်းလဲဆန့်ကျင်ပြန်တွန်းသည့်အခါပါပဲ တစ်နေရာရာတစ်ခုခုဖတ်ပါ။ သင်၏ဆိုဒ်သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစုပ်ယူပြီးသင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်လျှင်သင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမည်။ သင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ site status ကိုပိုနေမြဲကျားနေအောင်ချန်ထားပါ တစ်နေရာရာတစ်ခုခုဖတ်ပါ သင်၌ရှိသောအတိအကျရလဒ်များကိုသင့်အားရရှိစေသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုမှာကုမ္ပဏီတွေပျက်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ၁ တစ်နေရာရာတစ်ခုခုဖတ်ပါ အရေးမယူဘို့ဆင်ခြေ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စမ်းသပ်မှုများတွင်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချမည့်အစား၊ အချို့သော developer များသည်သူသည် site ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်မလိုဟုသူ၏ရူပါရုံကိုခုခံကာကွယ်ရန် Google ဖိုရမ်များကိုရှာဖွေနေသည့်နောက်ခန်းတွင်ထိုင်နေသည်။ ရယ်စရာကောင်းတယ်
တစ်ခုခု (ဒီဇိုင်း၊ စနစ်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အနေဖြင့်) ကိုအပြည့်အဝပြီးပြည့်စုံသော၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် (သို့) ဖြစ်နိုင်သမျှထိရောက်အောင်လုပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လုပ်ငန်းစဉ် (သို့) နည်းစနစ်၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်သင်္ချာဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအမြင့်ဆုံးကိုရှာဖွေသည်) ။ Merriam-Webster အဘိဓါန်
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အဆင့်အတန်းသေချာစေရန်စစ်ဆေးရန်စာရင်းမရှိ။ ဂူဂဲလ်မှအဖွဲ့သည်သင်လုပ်နိုင်သည့်အခြေခံအရာများနှင့်သင်၏အောင်မြင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်ကိရိယာအချို့ပေးခဲ့သည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသည်မိုဘိုင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်၊ မြန်ဆန်အောင်လုပ်ရန်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုသင်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိစေရန်သင့်အားသူတို့ကပြောလိမ့်မည်။ ရှာဖွေမှုအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာ - sitemaps, canonical links, meta description ၊ alt tag များ၊ HTML ဖွဲ့စည်းပုံ၊ pinging၊ သော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှု၊ အဆင့်ဆင့်စသဖြင့်…
ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းတို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာမပြောကြဘူး။ သင့် site ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲအကြံပေးတယ်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၊ ဗီဒီယိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဆိုက်တည်ဆောက်ပုံ၊ အညွှန်းစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။
စမ်းသပ် - ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပြောင်းလဲမှုများကိုစမ်းသပ်ရန်နည်းစနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်ဟုဆိုလိုသည်။
အတိုင်းအတာ - ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဆိုဒ်သို့သင်ပြောင်းလဲမှုများ၏ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရမည်၊ သို့မှသာမည်သည့်အရာသည်အလုပ်လုပ်သည်၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြောင်းပြောနိုင်သည်။
ပြwithနာတွေရှိတယ် တစ်နေရာရာတစ်ခုခုဖတ်ပါ အရေးမယူမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်
အဆိုပါ အချိန်ကိုက် ပေးသောအကြံပေးချက်သည်လက်ရှိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်ခေတ်နောက်ကျသွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခုကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုဂူဂဲလ်မှအထောက်အပံ့မပေးတော့ပါ။
အဆိုပါ အရင်းအမြစ် သင်တွေ့ကြုံနေရသောပြforနာများအတွက်အကြံဥာဏ်၏ပြည့်စုံမှုသည်လုံးဝဖြစ်နိုင်သည်။ အကြံဥာဏ်များသည်စီးပွားရေးဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားသောဆိုဒ်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအကြံဥာဏ်သည်သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်သို့မဟုတ် ဦး စားပေးလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် ... သင်ပိုကောင်းအောင်။ အကယ်၍ သင်သည် SEO မဟာဗျူဟာများကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသည့်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်နေပါက၎င်းကိုမအောင်မြင်စေရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့မှာအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်အသင်းကိုသွားစရာမလိုဘူး တစ်နေရာရာတစ်ခုခုဖတ်ပါ.
အဆိုပါ တစ်နေရာရာတစ်ခုခုဖတ်ပါ ဆင်ခြေသွားရန်ရှိသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောအကြောင်းပြချက်များစွာကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သင်လုပ်ခဲ့သည့်အရာသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်မချင်းရလဒ်များကိုမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည် - မတူကွဲပြားသောနည်းစနစ်များကိုဆက်လက်လေ့လာပါ၊ သို့မှသာမည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသင်တွက်ဆနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ဂူဂဲလ်ကဘာလုပ်ရမှန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့မပေးရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂူးဂဲလ်ကဘယ်တော့မှလင့်ခ်တွေမပေးရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မလုပ်ပါနဲ့
အခြားအရာအားလုံး optimization များအတွက်ပွင့်လင်းသည်။ ဆင်ခြေနှင့်အတူတက်လာခြင်းနှင့်ယခုသင့် site ကိုပိုကောင်းအောင်စတင်!
Tags: လုပ်ပါအတိုင်းအတာတစ်နေရာရာတစ်ခုခုဖတ်ပါရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationရှာဖွေနည်းစနစ်ရှာဖွေရေး optimization ဖြစ်စဉ်ကိုseoစမ်းသပ်